June 2011 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 9:09 AM | 1 Comment |
မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော် (BIA) အားဖျက်သိမ်းပြီးမြန်မ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် (BDA) ကိုပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ၁၉၄၂ ခုနှစ်ကဖြစ်သည်။တပ်အင်အားသုံးထောင်ကျော်ရှိသောမြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော်အား ဂျပန်အာဏာပိုင်တို့ကလက်တစ်ဆုပ်စာခန့်ရှိသော မြန်မာ့လွပ်လပ်ရေးတပ်မတော်ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပေးပြီး မြန်မာ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုဦးစီးရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအားဗိုလ်မှုးကြီး (ကာနယ်) အဆင့်သို့လျှော့ချလိုက်သည့်အချိန်မှစပြီး အရာရှိ၊အရာခံ၊အကြပ်၊တပ်သားအားလုံး စိတ်ထိခိုက်ကာစိတ်ဓာတ်ကျနေကြသည် ။
ဘင်လာဒင်ကို ဘယ်လိုသတ်ခဲ့သလဲ ?
by Ye Thurein Min on Monday, May 2, 2011 at 9:29pm
မှောင်မိုက်နေတဲ့ညမှာ အမေရိကန် ရဟတ်ယာဉ်တွေဟာ နံရံမြင့်ကြီးတွေ ကာရံထားတဲ့နေရာတခုကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ကမ္ဘာ.အစိုးရွားဆုံး အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင်ကို ဖမ်းဖို့ (၀ါ) သတ်ဖို့ပါ။ ထိုသို့ချဉ်းကပ်ပြီး မိနစ် ၄၀ မပြည့်ခင်မှာပဲ ဘင်လာဒင်ဟာ အပေါင်းအပါ ၄ ဦးနဲ့အတူ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ 2001 စက်တင်ဘာ 11 အမေရိကန် ကုန်သွယ်ရေးအဆောက်အအုံ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုနောက်ပိုင်း လိုက်လံနိမ်နှင်းနေတဲ့ အယ်ကေးဒါးခေါင်းဆောင် ဘင်လာဒင်ကို သယ်ဆောင်လာနိင်ခဲ့ပါတယ်။
by Hsaung Theway on Monday, June 27, 2011 at 2:52pm
မျက်နှာမပါသောလူတို့၏ ။ နေရာ၊ မိုးတိမ်တွင်ပွင့်သောပန်းများ၊ ချိုးချိုးချွတ်ချွတ်ကြည်ပြာရောင်များ၊ ကားများအုံ့ဆိုင်နေသောတိုက်တာများ၊ ဟန်ဆောင်နေသောမဏ္ဌိုင်များ၊ လမ်းလျှောက်နေသော င်္အကျီများ၊ ဟင်းလင်းပြင်ရှိမွှေ့ယာများ၊ နီနီရဲရဲ နှုတ်ခမ်းများ၊ ထိုနေရာသည်အုပ်စုဖြစ်သည်။
မိုးညို့ဧ။် ။ ဖက်လုံးတစ်ခုဧ။် အိမ်မက်ကို အနက်ကောက်ကြည့်သည်။ စမ်းချောင်းများသည် မီးခိုးထွက်၍၊ ကျောက်တောင်များသည် ရိုင်းစိုင်းဧ။်ခြေရာသည်ဖိနပ်စီး၍ ခရမ်းတောတွင်လမ်းလျှောက်နေသည်။ ဆူးဒဏ်ရာသည် ရင်ဘတ်၌သာပေါက်ရောက်လေတော့ဧ။် ။
မျက်စိ(သို့ )သိသင့်မည်ထင်သော မျက်လုံးအကြောင်းသိကောင်းစရာ
လူသားများအားလုံး မိမိတို့မျက်စိထိန်းသိမ်းကြရန်နှင့် မိမိတို့အရှက်အင်္ဂါများကို ထိန်းသိမ်းကြရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။မိမိတို့ ထိန်းသိမ်းသင့်သည်များကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် လူသားများအဖို့
အစင်ကြယ်ဆုံးဖြစ်သည်။ထို့အပြင် မိမိတို့မျက်စိများကို နိမ့်ချထားရန်နှင့် မိမိတို့၏ အရှက်အင်္ဂါတို့
ကိုထိန်းသိမ်းကြရန် ပေါ်လွင်နေတတ်သော အလှတရားအချို့မှ လွှဲပြီး ကျန်အလှပတို့မပေါ်ကြရန်
အမျိုးသမီးများတွင်သာမကပဲ အမျိုးသားများလည်း သိထားသင့်ပေသည်။
Author: lubo601 | 5:30 AM | No မှတ်ချက် |
တူနီးရှား၊ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား၊ ယီမင်၊ ဆီးရီးယား အာရပ်နိုင်ငံများတွင် တနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံ နွေဦးပေါက်သစ်က ရှင်သန်ပေါက်ဖွားလာခဲ့ရာ နိုင်ငံရေး အုံကြွမှုဆိုင်ရာ ဒိုမီနိုသီအိုရီ အသစ်တရပ်သဖွယ် ပေါ်ထွက်လာသည်။ ယခု မငြိမ်မသက်မှုများနှင့် တော်လှန်ရေးများက အာရပ်ကမ္ဘာ သက်သက်မျှသာလောဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိနေသည်။ အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဂျွန်မက်ကိန်း မကြာသေးမီက မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း ပြောခဲ့သလို "အပြောင်းအလဲ လေပြေ" က မြန်မာနိုင်ငံ တောင်တန်းနှင့် မြေပြန့်ဒေသများသို့ တိုက်ခတ်လာလေမည်လောဟုလည်း စောကြောဖွယ် ရှိနေသည်။
စားသုံးသူတွေဟာ၊ အရေးပါအရာရောက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်တည်မြဲဖို့၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရေးအတွက် ကျေးဇူးရှင်တွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို၊ ကျွန်တော်တို့တတွေ အနှစ်(၂၀)လောက် ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမယ့်၊ သိပ်ပြီးအရာမရောက်လှပါဘူး။
တစ်နေ့ကပဲ၊ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့၊ လူမှုရေးတာဝန်ကျေပြွန်မှု (Corporate Social Responsibility) နဲ့ ပတ်သက်လို့ တနေကုန်ကျင်းပတဲ့၊ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ စတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပညာရှင်တွေ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။ သူတို့တတွေက၊ ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရောက်၊ အတွေ့အကြေုံတွေ ရသင့်သလောက်ရထားကြတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်လို့၊ သူတို့ဆီက အတုယူစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့်၊ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ကိုယ် လုပ်စရာတွေကလဲ အများကြီးပါ။
Sein Khat Soe
တခါက ငွေသော်တာရောင်ခြည်များသို့.......စင်္ကာပူနှင့်တကွ အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်မှ ချစ်သူငယ်ချင်း လဒမများသို့ )
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ဗိုလ်အောင်ဆန်းဆိုတဲ့ စစ်သားလေးတစ်ယောက်ဟာ ဆေးရုံသွားတက်ရင်း မခင်ကြည်ဆိုတဲ့ သူနာပြုဆရာမကလေးနဲ့ ဆုံမိကြပြီး နဖူးစာရွာလည်သွားသတဲ့။ ပုံပြင်မဟုတ်ဘူးနော်။ တကယ့်အဖြစ်အပြက်။ လူတိုင်းသိပြီးသား။ ထူးဆန်းသလားဆိုရင် မထူးဆန်းပါဘူး။ သူသူကိုယ်ကိုယ် အဖေတွေအမေတွေ အဖိုးတွေ အဖွားတွေ ဒီလိုပဲ ဖူးစာဆုံတတ်ကြသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာတစ်ခုတော့ ပြောပြရဦးမယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက မြန်မာတမျိုးသားလုံး သူ့ကျွန်ဘ၀ရောက်နေလို့ တိုင်းပြည်ကြီးကို ကယ်တင်ပေးမယ့် သားကောင်းရတနာတွေကို မြှော်လင့်နေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ မြန်မာ့တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ကို ဘယ်လောက်အထင်ကြီး အားကိုးလိမ့်မယ်ထင်သလဲ။
အိပ်မပျော်သူအတွက် ညတာဟာ ရှည်လျားလှတယ်လို့ ဓမ္မပဒက ဆိုပါတယ်။ အိပ်မပျော်နိုင်တာမို့ ကျနော် စာ ထရေးဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်ဒီစာကိုရေးနေချိန်ဟာ ညတနာရီထိုးပြီးပါပြီ။ တနှစ်မှာသုံးလလောက်တခေါက်တကျင်း ကျနော်ရှိရာ ဖူးခက်မြို့ကို ရောက်,ရောက်လာတတ်တဲ့ ဇနီးသည်ဟာ ကျနော့်မနီးမဝေးမှာ အိပ်ပျော်နေရှာပါတယ်။ အောက်ထပ်က ကားဂိုဒေါင်မှာတော့ တပည့်ကျော် ကျော်ဝင်းဌေးလည်း အိပ်ပျော်နေလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျနော့်အိမ်ရှိနေတဲ့ အမ်မခန်ဝန်းကျင်တခုလုံး ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေပါပြီ။ တခါတခါမှာတော့ ခပ်လှမ်းလှမ်း ကားလမ်းပေါ်က ကားတွေဖြတ်မောင်းနေတဲ့ အသံတွေကို ကြားနေရပါတယ်။
ကျနော်နေထိုင်သော မြို့ကလေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်းရင်းသားလူမျိုး စုစုပေါင်း ၁၈၀၀နီးပါးခန့်နေထိုင်ကြ သည်။ မြန်မာပြည၊် ထိုင်း၊ မလေးရှားနိုင်ငံတို့မှ လာရောက်ခါ အမေရိကန်တွင် အခြေချနေထိုင်နေကြသည်၊ သူတို့နှင့်အတူပါလာကြသူများ မှာ ကလေးအများစုဖြစ်သည်။ရောက်လာကြပြီဆို...ရင် နေထိုင်ဖို့စီစဉ်ရသည်မှ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်မှစီစဉ်စရာရှိတာစီစဉ်။
by cherrymyodaw on Wednesday, June 29, 2011 at 2:51am
(၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၃) ရက်နေ့ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်က ဆရာမောင်ဝံသရဲ့ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာသတင်းလောကမှာ ပွင့်လင်းမှုမရှိဘူး၊ အရင်အတိုင်းပဲလို့ ပြောနေသူများအတွက် အခြေအနေကို သိစေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ )
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မှု (Leadership) ရဲ့အခန်း ကဏ္ဍဟာ အဲဒီနိုင်ငံ လူလိုသူလို အဆင့်မီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးပြီး အခရာကျတယ် ဆိုတာ ငြင်းစရာမလိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
မြင့်မြတ်ထက်မြက်ပြီး လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ (Good Leader) ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေက ဒီအချက်ကိုသက်သေခံလျက်ရှိပါတယ်။
Author: lubo601 | 4:57 AM | No မှတ်ချက် |
ဥာဏ်စမ်း ပုစ္ဆာ >>>> Funny
Author: lubo601 | 4:23 AM | No မှတ်ချက် |
"ကလီယိုပါထရာ စုဖုရားလတ်နဲ့ မလိုတမာ မဟာပုရိသများ "
Author: lubo601 | 4:13 AM | No မှတ်ချက် |
De Nay created the doc:
၂ဝ၁၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လထုတ် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာ မဂ္ဂဇင်း၊ အတွဲ ၂၇၊ အမှတ် -၆၊ စာ-၁၁၁ မှာ ဆရာမ ဒေါ်တင်တင်ဦးရေးတဲ့ ဟိုးလီးဝုဒ် ရွှေခေတ်၏ ဂန္ထဝင် မင်းသမီးချော အယ်လီဇဘက်တေလာ ကွယ်လွန်ရှာပြီ ဆောင်းပါးဖတ်နေတဲ့ လေဒီထူးက Cleopatra has gone လို့ အာမေဍိတ်လိုလိုနဲ့ ငမောင့်ကိုပြောတော့ ငမောင်ခေတ္တ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားပါတယ်။ တစ်လံပြမှ တစ်လက်မ မြင်နိုင်တဲ့ ငမောင်က ဘီစီ ၆၉ မှာ Cleopatra ဘုရင်မက ခုမှ ဆုံးရှာတယ်တဲ့လား ဝိုးဝါးကြောင်စီ ဖြစ်ပုံကို ကောင်းကောင်းရိပ်မိတဲ့ လေဒီထူးက Liz taylor လို့ ထပ်ပြောပါတယ်။ တည့်တည့်ကြီးပြောတော့ ငမောင်ချက်ချင်း သိသွားပါတယ်။
Author: lubo601 | 3:44 AM | 1 Comment |
မင်္ဂလာဒုံ မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ ပါ။ ဆရာ လယ်တွင်းသား စောချစ် မှ ဘဝမှစာ၊ စာမှဘဝ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆရာ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း) မှ သုတရသစာပေ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ဆရာမ သန်းမြင့်အောင်မှ မျက်ကြည်လွှာ ခေါင်းစဉ်ဖြင့် လည်းကောင်း ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ အားလုံးနားဆင်ရင်း သုတ/ရသ ဗဟုသုတ တွေရနိုင်ကြပါစေ။
ရယ်စရာ နောက်ကွယ်မှာ မျက်ရည်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာချစ်ဦးညို
Author: lubo601 | 3:36 AM | No မှတ်ချက် |
မျိုးသန့်| အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၅၈ မိနစ်
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပတွင် စာပေဟောပြောပွဲများ လိုက်လံ ဟောပြောနေသည့် စာရေးဆရာနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင် အစည်းအရုံး ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဆရာချစ်ဦးညိုသည် စာပေဟောပြောပွဲများ လိုက်လံ ဟောပြောရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး နယ်ပယ်များတွင်း ချွတ်ချော်မှားယွင်းမှုများကို ဟာသအဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြောဆိုတတ်ပြီး ထိုဟာသများ၏နောက်ကွယ်တွင် မျက်ရည်တွေရှိသည်ဟု ဆိုသည်။
by cherrymyodaw on Monday, June 27, 2011 at 11:14pm
(၂၀၁၁ခုနှစ် ဇွန်လ (၉)ရက်နေ့ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အယ်ဒီတာ့ အာဘော် ဖြစ်ပါတယ်။)
တရားမျှတသော လွတ်လပ်ခြင်းနှင့် မသွေ၊ တို့ပြေ တို့မြေ ဟူသည်မှာ တိှု့ဗမာ အစည်းအရုံး စတင် ထူထောင်စဉ်က တို့ဗမာ သီချင်း၏ အစပိုဒ် ဖြစ်သည်။ ခုတော့ နိုင်ငံတော် သီချင်း ဖြစ်လာပြီ။ တရား မျှတခြင်း၊ လွတ်လပ်ခြင်းသည် လူသားတိုင်း၏ ဘဝမှာ အလိုချင်ဆုံး အတောင့်တဆုံး အရာ ဖြစ်ပါသည်။ တရားမမျှတခြင်း၊ ချုပ်ချယ်ခြင်းသည် လူတို့ အမုန်းတီးဆုံး မလိုချင်ဆုံး အရာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
Author: lubo601 | 3:26 AM | No မှတ်ချက် |
လူမှုစီးပွားအဆင်ပြေ၍ ချမ်းသာကြွယ်ဝကြသူများ၏ သားသမီးများမှာ ဉာဏ်ရည် ပိုမို ထက်မြက်ကြသည်၊ ကျောင်းပညာရေးတွင် ပိုတော်ကြသည် ဟူသော အယူအဆမှာ ဆွေးမြေ့ ဟောင်းနွမ်းခဲ့ပြီးဖြစ်ပါ၏။
မိဘများ၏ လစဉ်၊ နှစ်စဉ် ၀င်ငွေ၊ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု ပမာဏ၊ နေထိုင်ရာမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက် စသည့် လူမှုစီးပွား နောက်ခံအခြေအနေများနှင့် ကျောင်းပညာရေး အောင်မြင်မှု ဆက်နွယ်နေမှု ဆိုသည်မှာ အတိတ် ကာလများတွင် ပြောဆို ဆွေးနွေးခဲ့သောပုံစံများလောက် ရိုးစင်းလှသည်တော့မဟုတ်ပါ။
အိုင်တီ၊ ပညာနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ (ဆရာကျော်ဝင်း)
Author: lubo601 | 3:19 AM | No မှတ်ချက် |
De Nay 4:09pm Jun 2
စကားဝါမြေ - Thursday, 26 May 2011
လူမှုကွန်ရက် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Myanmar Network ရဲ့ (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် အသင်းဝင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို မေလ ၂၁ ရက်နေ့ နေ့လည် (၁၂) ကနေ ညနေ (၅)နာရီခွဲ ထိ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကမ်းနား ဟိုတယ်ခန်းမ မှာ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအခမ်းအနားမှာ ဆရာကျော်ဝင်း ပြောသွားတဲ့ "အိုင်တီ၊ ပညာနဲ့ စိန်ခေါ်မှုများ" ပြောကြားချက်တွေထဲမှာ အယူအဆသစ်တွေ ပါလာတဲ့ အတွက် သဘောကျ ပါတယ်။ ဖမ်းထားတဲ့ အသံဖိုင်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ မိတ်ဆွေတွေလည်း နားထောင်နိုင်အောင် တင်ပေးထားပါတယ်။
ယခု အသံဖိုင်ကို ဒီနေရာ ကနေ ရယူပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော့်ရဲ့ မေးလ်ထဲကို ပို့လာပေးတဲ့ ZawNaingOo ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါအပြင် သူညွှန်းလိုက်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာ မူရင်း တင်ပေးတဲ့ ကို Aung Myo Htun ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မြန်မာစာအုပ်များကို အခမဲ့ တင်ဆက်နေသော Website တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
လူငယ်သည်ပင်မအသက်သွေးကြောတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုပြောရမလောက်ပင်အရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်လေသည်။လူငယ်တွေ အပေါ်သည်လိုမြင်တက်လာရာမှထိုကဲ့ သို့ အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင်ရှိနေသောလူငယ်သည်စာပေဗဟုသုများစွာရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း
ရှိသည်ဟုလည်းခံစားမိလာသည်။စာပေဗဟုသုတရှိ၇န်အတွက်စာဖပေလေ့ လာလိုစိတ်ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။စာပေလေ့ လာလိုစိတ်သည် အချိန်ယူလေ့ ကျင့် ယူမွေးမြူရသည့် အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လေသည်။
Author: lubo601 | 11:34 PM | 1 Comment |
အမျိုးသားများ အုပ်ချုပ်သည့် ခေတ်ကာလ မပေါ်မီ နှစ်ပေါင်း များစွာကတည်းကပင် အမျိုးသမီးများ စာပေသင်ကြားခွင့် မရခဲ့ကြပေ။ အမျိုးသမီးများ စာပေသင်ကြားခွင့်မှာ မစားကောင်းသည့် အရာ တစ်ခုကဲ့သို့ ပိတ်ပင် တားမြစ်ခံခဲ့ကြရသည်။ သို့သော်လည်း အမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းပကားသည်ကား ပိတ်ပင်တားဆီးများ အကြားမှပင် စွမ်းဆောင်နိုင်သူ များစွာ ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်မှာ ထူးခြားလှသော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပေသည်။ ကမ္ဘာ့စာပေတွင် ၁၁ ရာစုအတွင်း ပထမဆုံး ၀တ္ထုရေးသားခဲ့သူမှာ ဂျပန်အမျိုးသမီး မူရာဇကီ ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို ဖန်တီးတည်ထောင်သည့် ဗိသုကာလည်းဖြစ်၊ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲကို ဦးဆောင်သူလည်းဖြစ်၊ နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး သူရဲကောင်းကြီးလည်း ဖြစ်သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၇ ခု၊ ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ တွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ၏ လမ်းခုလတ်၌ ကျဆုံးရစဉ်အခိုက်အတန့်တွင် အသက် ( ၃၂ ) နှစ်သာရှိသေးသည်။ လူ့ဘ၀၏ ငယ်ရွယ်သေးသော ပျိုမျစ်သေးသော အရွယ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ၁၉၄၇ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သော ကြားဖြတ်ယာယီအစိုးရအဖွဲ့၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ကာကွယ်ရေးနှင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများကိုလည်းကောင်း ဦးစီးတာဝန်ယူလျက် ရှိလေသည်။
“လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခြေခံသဘောတရားများ”
Author: lubo601 | 11:20 PM | No မှတ်ချက် |
by Sein Khat Soe on Tuesday, June 28, 2011 at 2:41am
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် အခြားအခြားသော ဖွဲ့ဖြိုးဆဲ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှေးကွေးဆဲ၊ ဆုတ်ယုတ်ဆဲနိုင်ငံများနည်းတူ “လူထုအခြေပြုအသင်းအဖွဲ့များ” ဟုခေါ်ဆိုသော အသင်းအဖွဲ့များ မရေမတွက်နိုင်လောက်အောင် ၁၀စုနှစ်တစ် ခုအတွင်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအသင်းအဖွဲ့များကို တိကျသေခြာသောနည်းများဖြင့် မည်သို့ဦးဆောင်ကြမည်။ မည်ကဲ့သို့ အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင်ပြု လုပ်မည်ဆိုသည်ကတော့ စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုလို၊ အိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုကို ဖြစ်နေသေးသည်။
စာပေဟောပြောပွဲ ( ၉၅ ) ဖိုင်
2 AKyiTaw - DoteKhaSoTar YeeSayar 3:35
3 AttaKyaw - AttaKyaw TanPhoeShiDeLu MawLaMyaing 2010
Author: lubo601 | 6:12 AM | 1 Comment |
(အရမ်းကောင်းတယ် ဘ၀အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဆက်ဆံရေးအတွေးဒဿန)
ဆရာက ကျောင်းသားနှစ်ယောက်ကို မေးခွန်းမေးပါတယ်။ အင်မတန်အဆင့်မြင့်ပြီးအတော်စဉ်းစားယူရတဲ့ သင်္ချာဥာဏ်စမ်းတွေပါ။ ပထမကျောင်းသားက မေးခွန်းခက်တာကို မြင်ပြီး ဒီလိုစဉ်းစားပါတယ်၊ "ဆရာက ငါမဖြေနိူင်မယ့် မေးခွန်းတွေကို တမင်သက်သက်မေးတာပဲ၊ ဟိုတစ်ခါတုန်းက သူလာတာကို ထနှုတ်မဆက်...ပဲ နေမိတာကို မကျေနပ်လို.ဖြစ်မယ်".... သူဒီလို စတွေးတာနဲ.တင် မေးခွန်းတွေကို ကောင်းကောင်းမဖြေနိူင်တော့ပါဘူး... နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ဒီလိုမြင်ပါတယ် "ဆရာ့မေးခွန်းတွေက အတော်အဆင့်မြင့်တယ်၊ ငါတို.အဆင့်နဲ့ဖြေလို.ရတဲ့မေးခွန်းတွေ ဖြစ်လောက်ပါတယ်၊
ဒီစကားလုံးကို ကြားရသည့်အခါတိုင်း ရုရှားသူရဲကောင်းမလေး ဇိုယာက ကျွန်မရဲ့ အတွေးအိမ်ထဲသို့ ၀င်ရောက်လာတတ်သည်။ ခုနစ်တန်း ကျောင်းသူဘ၀၊ ပြင်ပစာပေများ၊ ဗဟုသုတများကို သဲသဲမတ်မတ် လိုက်ရှာနေချိန်မှာ ဇိုယာက ကျွန်မနှလုံးသားထဲသို့ ရုတ်ခြည်း ၀င်ရောက်လာခဲ့တာဖြစ်သည်။ လည်ပင်းမှာ ကြိုးကွင်းစွပ်ခံထားရချိန်တွင် ဇိုယာ ပြောကြားလိုက်သော စကားလုံးများက ကျွန်မသွေးကြောများအတွင်းသို့ တစုံတရာ အင်အားတို့ကို စီးဝင်သွားစေခဲ့သည်။
[By Nyi Thit ]
တစ်ခါတုန်းက ပင်လယ်ထဲမှာ ကျွန်းတစ်ကျွန်း ရှိတယ်။ အဲဒီကျွန်းမှာ ခံစားမှုတွေ အကုန်လုံး နေထိုင်ကြသတဲ့။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ပျော်ရွှင်မှု၊ ကြွေကွဲမှု၊ အမြော်အမြင်ရှိမှု၊ ချမ်းသာမှု၊ ဆင်းရဲမှု စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။
... တစ်နေ့မှာ အဲဒီကျွန်းကြီး ပင်လယ်အောက်မြုပ်တော့မယ်လို့လည်း သတင်းကြားရော အားလုံးက ကျွန်းကနေခွာဖို့ ပြင်ကြဆင်ကြတာပေါ့လေ။
Author: lubo601 | 10:26 PM | No မှတ်ချက် |
by Wai Maw on Monday, June 27, 2011 at 10:06am
(၂၀-၆-၁၉၄၆) နေ့မှာကျင်းပတဲ့ ပထမအကြိမ် ဖဆပလညီလာခံမှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းက နိုင်ငံရေးနဲ့ ဘာသာရေး မတူကွဲပြားပုံကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်-
“ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာရေးဆိုသည်မှာ လူအသီးသီးတို့၏ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးမှာကား လူအသီးသီးတို့၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုသိပ္ပံအတတ်သာလျှင်ဖြစ်၏။ သိပ္ပံအတတ်အနေအားဖြင့် နိုင်ငံရေးသည် လူအသီးသီးတို့၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရပေလိမ့်မည်။ အခွင့်အရေးများတွင် လွတ်လပ်စွာ ဘာသာကိုးကွယ်မှုလည်း ပါသည်။ ဤအခွင့်အရေးပေးရာ၌ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နိုင်ငံရေးနှင့် ဘာသာရေး နှစ်ဌာန စပ်ကြားတွင် စည်းထားရပေလိမ့်မည်။
by Aungmyo Tun on Monday, June 27, 2011 at 11:49am
ကြိမ်လုံးအကြောင်း စဉ်းစားမိတိုင်း အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ကြုံခဲ့ရတာလေး
တစ်ခုကို အမြဲ သတိရနေမိပါတယ်။
မြန်မာစာအချိန်မှာ ပင်ရင်းစကားပြေ လက်ရွေးစင်ထဲက “မင်းတုန်းမင်းနှင့် ငါးခြောက်ပြား”
ဆောင်းပါးကို သင်ပြီးစပေါ့။ မင်းတုန်းမင်း ငယ်ရွယ်စဉ် မောင်လွင်ဘ၀က စံကျောင်းဆရာတော်
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ အဓိပါယ်များစွာဖြင့် ပြောင်မြောက်လွန်းပြီး တွေးစရာတွေများတဲ့ ကာတွန်း
by Moe Ye on Saturday, June 25, 2011 at 5:30pm
Min Thant Syn
ကျောင်းတုန်းက ကျနော်တို့ အဆောင်ကို လာလည်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်က "မင်းတို့ တဆောင်လုံးမှာ (သူငယ်ချင်း ၈ ယောက်နေပါတယ်) မင်းတယောက်ပဲ လစ်ဘရယ်ကျတယ်"
လို့ပြောပါတယ်။ အမှန်အတိုင်းပြောရင် လစ်ဘရယ်ဆိုတာကို အဲဒီတုန်းက ကျနော်သေချာမသိပါဘူး။ (အခုလည်း သေချာမသိပါဘူး)။
by ရီ တိုး on Monday, June 27, 2011 at 10:38am
ပြေး၍ ဝက်ဆိုက်နာမည်ကို ကူးယူဟန်ပြလိုက်သည်။
”ကျနော့်သမီးကို သံလွင်မှာ မျှောခဲ့ရသော်လည်း...”
by အိုးဝေအောင် အိုးဘားမား on Monday, June 27, 2011 at 10:32am
၂၀၁၁ ခုနှစ် မေလထဲတွင် ကျနော့ သူငယ်ချင်း သိန်းထိုက်ဦး (VOA)နှင့် ဇနီးသည် မသီရိတို့ရှိရာ ၀ါရှင်တန်ဒီစီ သို့ အလည်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်း၊ ၁၉၈၈ ကာလ ပြည်တွင်းတွင် ဖြတ်သန်းခဲ့မှုများနှင့် မိမိတို့ မတွေ့တော့သည့် အချိန်ကာလများအတွင်း မိမိတို့ ဖြတ်သန်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို နောက်ကြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့သည်၊။
by Sein Khat Soe on Monday, June 27, 2011 at 10:40am
ဒီနေ့အဆောင်မှာ အလုပ်ပိတ်ရက်မို့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ညီညီမတွေ မုန့်ဖတ်သုတ်နဲ့ ကြာဇံသုတ် လုပ်စား ကြ တယ်။ အဆောင်ရဲ့မီးဖို ချောင်ထဲက ထမင်းစားခန်း ကျဉ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မတ်တတ်ရပ်သူရပ်၊ စားပွဲမှာ ထိုင် သူထိုင် ချဉ်ငံစပ်စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြီး ချွေးတလုံးလုံး၊ ရှုးရှုးရှဲရှဲစားနေကြတဲ့အထဲ ကိုယ်လည်းတစ်ယောက် အပါအ ဝင်ပေါ့..။ ကိုယ်က အသုတ်စားရင် ဂေါ်ဖီတို့၊ နံနံပင်တို့ထည့်တာမကြိုက်ဖူး မုန့်ဖက်သုတ်ကို ကြက်သွန်ဖြူဆီ ချက် အဖတ်ရွှဲရွှဲ မွှေးမွှေးလေးနဲ့ ငံပြာရည်လေးလေးရောသုတ်ပြီး၊ မုန့်ဟင်းရည်လေးက အရည် သောက်အဖြစ် ပါလိုက်လို့ကတော့ လွှတ်ကြိုက်တာပေါ့..။
ကျွန်တော့် ရောဂါ (ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ရော ဂါနဲ့ တူသူများရှိမလားလို့ ..................)
by MoMo Aung on Sunday, June 26, 2011 at 8:27pm
ကွန်ပြူတာရှေ့မှာ ထိုင်မိလို့အားအားယားယားလေးများဖြစ်နေရင် ဒီလက်က မောဇီလာပဲ သွားသွားနှိပ်မိနေလို့ပါ ။ ပီးရင် ဘာရယ်မသိဘူး ကီးဘုတ်ပေါ်လက်တင်စဉ်းစားလိုက်ရင် ဂျီမေးလ် ပဲ ဖွင့် မိပြန်ရော…..လက်ကပဲ အကျင့်ပါနေလို့ လားမသိ ctrl+ t လေးနှိပ်လိုက်ပီး www.facebook.com ဆိုရိုက်မိပြန်ရော….လူ့စိတ်များပြောပါတယ်……
by Han Thit Nyeim on Sunday, June 26, 2011 at 10:45pm
ရာဇဝင်တွေထဲမှာ စကားလုံးတွေ အများကြီးမရှိဘူး။ ဇာတ်ကောင်တွေ အများကြီးမပါဘူး။ ခံယူချက်တွေ အများကြီး ရောထွေးမနေပါဘူး။
by ဗမာပြည်ဖွား ညီနောင်များ on Sunday, June 26, 2011 at 10:31pm
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်လောက်က ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေမှာရှိတဲ့ တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာ ဆင်၊ ကျား၊ ခြင်္သေ့၊ ကျားသစ်၊ ကြံ့၊သမင်၊ ဒရယ်၊ ရေမြင်း၊ ၀ံပုလွေ၊ မြေခွေး၊ ၀က်ဝံနဲ့ အခြား တိရစ္ဆာန်ငယ် ပေါင်းစုံတို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြတယ်။ ကျားဟိန်းသံ၊ ခြင်္သေ့ဟောက်သံ၊ သမင်တောက်သံ၊ ဒေါင်းတွန်သံနဲ့ ကျေးငှက်သာရကာသံတွေကို အခါမလပ် ကြားနေကြရတယ်။
ဝါးလုံးခေါင်းထဲ လသာခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ရာဇဝင်
by Zaw Myo Lwin on Thursday, April 28, 2011 at 1:34am
မိမိဟာ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားခဲ့စဉ်က မသင်မနေရ ဘာသာအဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကို သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ အဲသည်လိုဘဲ ရန်ကုန်မြို့မှာကျောင်းနေခဲ့စဉ်ကလည်း မြန်မာ့သမိုင်းကို သင်ကြားခဲ့ရပါတယ်။ ရှေးက သမိုင်းကြောင်းကို ကျောင်းတွေမှာသင်တဲ့အခါ ကိုယ့်လူမျိုးက ကိုယ့်သမိုင်းကို အကောင်းဘဲ ရေးကြတယ်ဆိုတာ တွေ့လာရပါတယ်။ သို့သော် သမိုင်းကြောင်းရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို အခြားလူမျိုးခြားတွေရဲ့ သမိုင်းတွေနဲ့ပါတွဲပြီး နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရတဲ့ အခါမှာတော့ သမိုင်းကပြောတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေကို ကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန် ကြည့်မြင်လာနိုင်ပါတော့တယ်။
Author: lubo601 | 8:27 AM | No မှတ်ချက် |
by Hlaing Win Tun on Wednesday, January 12, 2011 at 4:55pm
အောင်မြင်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးဟာ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာတော့ သူ့နေရာမှာဆက်ခံမယ့်သူတစ်ယောက်ကို ရွေးချယ်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သား သမီးများနဲ့ လက်ရှိသူ့လုပ်ငန်းက ဒါရိုက်တာများထဲက ရွေးချယ်ဖို့ထက် တခြားနည်းလမ်းတစ်မျိုးနဲ့ ရွေးချယ်ဖို့ သူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။
by Hlaing Win Tun on Wednesday, January 12, 2011 at 4:59pm
တန်ဖိုးထားမှုလေးတစ်ခု တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုမှာ အရေးကြီးဆုံးအရာတစ်ခု ဖြစ်လာတာက အလေးအနက်တန်ဖိုးထားတဲ့အသိအမှတ်ပြုမှုလေး တစ်ခု (Appreciation) ပါ။ လောလောလတ်လတ် ကျောင်းပြီးခါစ လူငယ်တစ်ယောက်က သူ့ဘဝ တလျှောက်လုံးမှာ လေ့လာမှုတိုင်းကို ထူးထူးချွန်ချွန် ဖြတ်သန်းခဲ့သူဖြစ်တယ် ။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၇ ရက်နေ့က စတင်ကျင်းပသော ( ဖ-ဆ-ပ-လ ) ပြည်လုံးကျွတ် ညီလာခံသဘင်ကြီးသို့ မြန်မာတပြည်လုံးမှ လူထုကိုယ်စာလှယ်များနှင့် ပရိသတ်ပေါင်း နှစ်သိန်းကျော်တက်ရောက်ကြ၏ ။ ယင်းလူထုညီလာခံတွင် ၂၃-၁-၄၆ နေ့၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ညီညွတ်ရေးအဆိုကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းလင်းတင်သွင်းခဲ့လေသည် ။ အဆိုတင်သွင်းရာတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက အောက်ပါအတိုင်း ပြောသွားခဲ့သည်။
by Zaw Myo Lwin on Friday, May 20, 2011 at 1:53am
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးတွေ တိုးတက်တဲ့ တတိယနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်သွားကြရင် အတွေးအခေါ်တွေ မြင့်မားလာမယ်။ အတက်ပညာ၊ နည်းပညာတွေ ရရှိလာမယ်။ အဲဒီ လူ့အရင်းအမြစ်တွေဟာ မြန်မာပြည်ကြီးအတွက် အကောင်းဆုံးသော သံယံဇာတတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်ယူဆမိတယ်။
ဘဝမှာ မရှိမဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ..?
by Hlaing Win Tun on Tuesday, June 7, 2011 at 12:13am
"သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများရင် လျှောက်တဲ့လမ်းက ဖြောင့်သွားတယ်"တဲ့။
:-) ( ဟာသတိုများ)
by Zaw Myo Lwin on Sunday, June 26, 2011 at 8:32pm
by Hlaing Win Tun on Thursday, June 9, 2011 at 12:44pm
လူတိုင်းအောင်မြင်မှုရချင်ကြတယ်။ ဆရာဝန်က အောင်မြင်တဲ့ဆရာဝန်
ဖြစ်ချင်တယ်။ ဆင်ခြေဖုံးက ဆေးခန်းလေထဲမှာ လူနာမျှော်ရင်းဝတ္တုစာအုပ်တွေ
ဆိုင်ကြီးနဲ့ရောင်းတဲ့ မုန့်ဟင်းခါးသည် ဖြစ်ချင်တယ်။
၉၀ - ၁၀ နိယာမ
Author: lubo601 | 7:58 AM | No မှတ်ချက် |
by Hlaing Win Tun on Sunday, June 26, 2011 at 8:32pm
၉ဝ-၁ဝ နိယာမက သင့်ဘဝကို ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ (အနည်းဆုံးတော့ သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကို ပြောင်းလဲလိမ့်မယ်) ၉ဝ-၁ဝ နိယာမဆိုတာ ဘာလဲ? ဘဝရဲ့၁ဝ%က သင့်ရဲ့ကံကြမ္မာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့ ၉ဝ%က သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်အပေါ် မူတည်တယ်။
"တစ်ခါတုန်းက မိသားစုတစ်စုနေတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတံခါးမှာ"
Author: lubo601 | 7:06 AM | 1 Comment |
Rozoner King created the doc:
[By Nyi Thit]
ကလေးမလေးရဲ့ရှေ့မှာ လူငယ်တစ်ယောက် ရပ်နေတယ်။ စင်္ကြံမီးအလင်းရောင်မှာတော့ အဲဒီလူငယ်ဟာ အလွန် နာမကျန်းဖြစ်နေပုံရတယ်။ ပြီးတော့ အလွန့်အလွန်ကို သိမ်မွေ့နူးညံ့ပြီး အရောင်တာက်ပနေတဲ့ ပန်းနုရောင် အသားအရေလည်း ရှိတယ်။ အရေးပေါ် ကျရောက်လာမယ့် အန္တရာယ်အတွက် ဒီမိသားစုကို သူ လာပြီး သတိပေးတာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြတယ်။ မြို့ထဲမှာ ကူးစက်ရောဂါ ကပ်ဆိုး ဆိုက်ရောက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ အဲဒီရောဂါပိုးဟာ သုံးရက်အတွင်း သေဆုံးစေကြောင်းကိုလည်း ပြောပြတယ်။
ရောမလိုကျင့်ခြင်းနှင့် ၄င်း၏အစာမကြေမှုများ (localization and its discontents)
Author: lubo601 | 5:54 AM | No မှတ်ချက် |
by Pandora Pandori on Sunday, June 26, 2011 at 4:49pm
Author: lubo601 | 10:58 PM | No မှတ်ချက် |
by Khin Maung Nyo on Sunday, June 26, 2011 at 12:15pm
ဆင်းရဲသည့်နိုင်ငံများတွင် အတော်ဆုံးနိုင်ငံသားများ ပြင်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာသည့်အခါ နောက်ဆုံး၌ ၄င်းတို့ အကျိုးရှိတတ်ကြသည်။ ချမ်းသာသည့်နိုင်ငံများမှ လူများက ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်။ ၄င်းတို့က ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားများ၊ ပန်းကန်ဆေးသူများ၊ လယ်ယာလုပ်သားများ ၄င်းတို့၏ အလုပ်အကိုင်များကို ပြိုင်ဆိုင်လုယက်မည့် လစာနည်းသူများအဖြစ် ရှုမြင်ကြသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများက လူဦးရေ ပြင်ပသို့ ရွှေ့ပြောင်းမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ကြသည့်အခါ၌ ၄င်းတို့နိုင်ငံများမှ အကောင်းဆုံး၊ အတော်ဆုံးသူများ၊ ဆီလီကွန်ဗဲလီး သို့မဟုတ် ချမ်းသာသည့် နိုင်ငံများရှိ ဆေးရုံများ၊ တက္ကသိုလ်များသို့ ရောက်သွားသည့်ကိစ္စများအတွက် စိုးရိမ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဗြိတိန်၊ ကနေဒါနှင့် သြစတြေးလျကဲ့သို့နိုင်ငံများသည် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရများအတွက် လူဝင်မှုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လျှော့ပေးကာ အတတ်နိုင်ဆုံး ဆွဲဆောင်နေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
by ဆေးလောက on Saturday, June 25, 2011 at 9:49pm
စည်းကမ်း ဥပဒေနှင့် တာဝန်
ဒီမိုကရေစီ ဝါဒသည် ဝါဒ အသီးသီးတွင် အလွန် ကောင်းလှစွာသော ဝါဒတစ်ခု ဖြစ်သည်ကား မှန်၏။ သို့သော် ဤဝါဒ အတိုင်း အကျိုးရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရန်ကား မလွယ်။ စည်းကမ်း ဥပဒေကို ရိုသေတတ်၍ မိမိတို့၏ တာဝန်ကို မိမိတို့ သိတတ်သူများ သာလျှင် ဤဝါဒကို နည်းလမ်းတကျ အသုံးပြုနိုင်ကြ ပေလိမ့်မည်။
Htet Aung created the doc:
တနေ့သောစနေမနက်ခင်းမှာ အိမ်နားဈေးဝယ်ထွက်တုန်း အလယ်တန်းကျောင်း နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်မှာ အတန်းပိုင်ဆရာဖြစ်ခဲ့သူနဲ့ ပြန်ဆုံလိုက်ရတော့ အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာသွားမိတယ် ။ သူ နဲ့ အဆက်အသွယ်အပြတ်နေခဲ့တာ ကျွန်မ ဘွဲ့ ရပြီးတည်းကဆိုတော့ နှစ်တွေကြာနေပြီပေါ့ ။ ဒါနဲ့ပဲ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ သူ့ ဇနီးကလည်း မြန်မာကျောင်းသူတယောက်တည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မကို အမှတ်တရနဲ့ စကားတွေဆက်ပြောဖြစ်ခဲ့ကြတယ် ။
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဥပဒေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး လက်ခံထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်တပ် ဘက်ကလည်း ဒီဥပဒေမှာ အားနည်းချက် တစ်ချို့ ရှိတယ်။ သို့သော် သမိုင်း သင်ခန်းစာနဲ့ လက်ရှိ ပကတိ အရှိတရားများ အရ ဒီလောက်ပဲ ရနိုင်မယ်။ ဒီအခြေခံကနေပဲ အားလုံး ပေါင်းလုပ်ရင်း သူတို့အဆို ဒီမိုကရေစီ အတွေ့အကြုံများ ရင့်ကျက်လာရင် ပြောင်းကြတာပေါ့ ဆိုတဲ့ သဘောထားကို ဂမ်ဘာရီကို ပြောတဲ့ ရှင်းလင်းချက်တွေ၊ သတင်းစာ ဆောင်းပါးတွေမှာ မကြာခဏ ရည်ညွှန်းပြောတာ သတိထားမိပါတယ်။
မှန်တာပြောသစ္စာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံရေးဖိအား
၂၀၁၁ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက် ဆိုရင် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်း ၆၃ နှစ် ရှိပါပြီ။ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းကို လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာကြီးလို့ ခေါ်ဆိုကြတာဟာ မည်ကာမတ္တ မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ခေါ်ဆိုကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ...့တဲ့ အပတ်က ' ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဉာဏ်အသုံးရဆုံး ကာလ ' ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကျွန်တော် ရေးခဲ့ရာမှာ ၁၉၄၅ မှ ၁၉၄၇ အကြား လွတ်လပ်ရေး လက်တစ်ကမ်း အချိန် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကို ဘက်ပေါင်းစုံက ဝိုင်းဝန်း ထိုးနှက် တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းနဲ့ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။
"လမ်းပေါ်က တယောသံ "
Yarzar Yeni created the doc:
၀ါရှင်တန်ဒီစီရဲ့ မြေအောက်မီးရထားဘူတာ တစ်ခုထဲမှာ လူတစ်ယောက် ထိုင်ပြီး တယောကို စတီးပါတယ်။ အေးမြတဲ့ ဇန်န၀ါရီမနက်ခင်းတစ်ခုမှာပေါ့...
Author: lubo601 | 7:53 AM | No မှတ်ချက် |
ဗိုက်နာတာ၊ ဗိုက်အောင့်တာ ဗိုက်ရဲ့ညာဘက်အောက်ပိုင်း Right Iliacfossaဆိုတဲ့နေရာမှာ ဗိုက်နာရင်၊ အောင့်ရင်တော့ ယေဘုယျ အားဖြင့် Acute Appendicitis အူအတက်ရောင်ရောဂါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ လူအများခေါ်ဝေါ်ကြတာကတော့ အူအတက်ပေါက်ရောဂါလို့ အများက ခေါ်ကြပါ...တယ်။
အင်္ဂလိပ် ဥပဒေပြုစနစ် အခြေခံမိတ်ဆက်၊ Common Law System နှင့် တရားမျှတမှု
Author: lubo601 | 7:51 AM | No မှတ်ချက် |
by Lu Cifer on Saturday, June 25, 2011 at 5:21pm
တည်ဆဲ ကမ္ဘာ့ဥပဒေပြုစနစ်များ (Legal Systems) တွင် အဓိကအားဖြင့်
၅။ ဥပဒေစနစ် နှစ်မျိုးကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း (Bijudicial) (ဥပမာ - ရောမ စနစ်နှင့် အင်္ဂလိပ် စနစ် (သို့) မိရိုးဖလာနှင့် ဘာသာရေး ဥပဒေများ) ဟုရှိသည်။
Author: lubo601 | 7:44 AM | No မှတ်ချက် |
မီဒီယာနဲ့ဂျင်ဒါ (ဒုတိယပိုင်း) ရေးသူ- ဂျူး
Author: lubo601 | 7:36 AM | No မှတ်ချက် |
အမျိုးသမီးနှင့်မီဒီယာဟူသော စကားလုံးတွဲကို စဉ်းစားတိုင်း ကျွန်မအာရုံတွင် ပေါ်လာသော ကြော်ငြာလေးတခု ရှိသည်။ အဲဒါက နှစ်အနည်းငယ် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သော မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား ကြော်ငြာတခု ဖြစ်သည်။ ပန်းကန်အိုးခွက်ဆေးသည့် ဆပ်ပြာရည်တခုကို ကြော်ငြာခြင်းဖြစ်သည်။ ခိုင်သင်းကြည်က ပန်းကန်ဆေးပြသည်။ ခိုင်သင်းကြည် လှပါသည်။ ချစ်စရာ လည်းကောင်းပါသည်။ ပန်းကန်ကို ထိုဆပ်ပြာရည်ဖြင့် ဆေးပြသည့်အခါ တောက်ပပြောင်လက်သွားသည်ကို ပြသည်။
Author: lubo601 | 7:29 AM | No မှတ်ချက် |
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အနီး အင်းလျားလမ်းတဘက်တွင် ဒေါ်တီတီ၏မိဘမဲ့ကျောင်းတည်ရှိ၏။ ထိုကျောင်းမှာ မိဘမဲ့ကျောင်း ဟုခေါ်ဆိုသော်လည်း ရိုးသားစွာ မိတဆိုး ဖတဆိုးဖြစ်ရသော တကောင် ကြွက်ကလေးများ ခိုလှုံ ရာအရပ်ဟုကား မဆိုသာချေ။ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီး၏ လမ်းကြိုလမ်းကြား များတွင်ေ...လလွင့်နေကြသော တေလေ ကြမ်းပိုးကလေးများကို စေတနာရှင် ဒေါ်တီတီကိုယ်တိုင် ပုလိပ်မင်းကြီး၏ အကူအညီဖြင့် ထရပ်ကားကြီးတစီးနှင့် ညအခါ လှည့်လည်ကာ လမ်းဘေးပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် အိပ်နေကြရာမှလည်းကောင်း၊ အချုပ်ခန်းများမှ လည်းကောင်း ကယ်တင်စုဆောင်း တည်ထောင်ခဲ့သောကျောင်း ဖြစ်လေသည်။
Author: lubo601 | 11:31 PM | No မှတ်ချက် |
by Lu Cifer on Saturday, June 25, 2011 at 12:53pm
Author: lubo601 | 11:27 PM | No မှတ်ချက် |
by Bo K Nyein on Saturday, June 25, 2011 at 1:15pm
အင်္ဂလိပ်စကား မှာ History repeats itself ဆိုတာရှိတယ်။ ဆိုလိုတာက ရာဇ၀င်အဖြစ်အပျက်က သင်္ခန်းစာ မယူရင် ထပ်မှားလိမ့်မယ်လို့ ဆိုလိုတာ။ ထို့နည်းတူစွာ ရာဇ၀င် ဆရာကြီးဦးသန်းထွန်းကလည်း ရာဇ၀င် ကိုလေ့လာတာ (မ အ) ရအောင်လို့ ဆိုခဲ့တယ် မဟုတ်လား? ရာဇ၀င်ကိုသိမှ ရာဇ၀င်ထဲက အမှားတွေကို (ရှောင်) နိုင်သလို အောင်မြင်မှု တွေထဲ က (ဆောင်) ရန်တွေကို ရှာဖွေ အတု ယူနိုင် မယ် မဟုတ်ပါလား?
(မ အ) ချင်ရင် ဖက်စုံ ကိုနားထောင် ဖတ်ရှု လေ့လာပြီှးမှ လောဂျစ်နဲ့ ဒါကတော့ ဖြစ်နိုင်စရာရှိတယ်။ ဒါကိုတော့ လက်မခံနိုင်ဖူးဗျာဆိုပြီး အကျိုးနဲ့အကြာင်းနဲ့ ရှင်းပြနိုင်ရမှာပေါ့။
What's "the Revolution"?
by Zay Ya on Sunday, June 19, 2011 at 2:35pm
နှစ်ငါးဆယ်ကျော် ကြာမြင့်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ထက်တိုင် လိုအပ်နေဆဲ ဖြစ်သော အချို့ အကြောင်းအရာများ ( သို့မဟုတ် ) အားလုံးသော အကြောင်းအရာ များကို ရည်စူး၍ ၁၉၅၅ ခုနှစ်က မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ဆရာမောင်ထင် ရေးသားခဲ့သော “တော်လှန်ရေး” အမည်ရှိ ဆောင်းပါးကို တင်ရှိပါသည်။
“သတင်းမီဒီယာသည် စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သည်” ဟု ဆိုကာ - လေမတိုးပဲနှင့်ပင် ယိုင်ယိုင် နေကြသည်ဖြစ်၍ ကြိုးစားထိန်းမတ်နေရသော ကာလကြား၌ လူထု၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လိုအပ်ချက်များ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပ မီဒီယာများ ၏ လှုံ့ဆော်မှုများ ၊ ပြည်သူတို့၏ အသံများ၊ စသည်တို့တွင် အချို့သည် လိုသည်ထက် ပိုနိုင်ပြီး၊ အချို့သည် မပိုနိုင်ဘဲ လိုနေလိမ့်မည်။ ( လိုနေသည်က များသည် )
Author: lubo601 | 10:48 PM | No မှတ်ချက် |
by Youn Myat Thwe on Saturday, June 25, 2011 at 12:38pm
မနက်အစောကြီး ဗိုက်ကစအောင့်တယ် ဆေးထသောက်ရင် သက်သာမယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် ထသောက်ရင် အိပ်ရေးပျက်မှာ ဘယ်ရမလဲ....
ဟိုဘက်စောင်းပီး စောင်ကလေးနဲ့ဖိအိပ်တယ်......အားးးးး မရတော့ဝူး....တောက်..စိတ်ကြီးညစ်ပါတယ်....
ရော် ဆေးဘယ်မှာလဲ...ဟာကွာ မီးမြန်မြန်ဖွင့်ပါဟ...ဟိုက်....ညကလုပ်ထားသမျှတွေ တခုမှ မသိမ်းမိဝူး
တအားအိပ်ချင်နေတာနဲ့ ခုလဲ မျက်စိက သိပ်ပွင့်မဟုတ်ဝူး
by Ye Myint Thu on Monday, June 20, 2011 at 12:43pm
“ငါတို့တွေလုပ်ရမယ့် နိုင်ငံရေး” ဆိုတဲ့ ပေးစာလေးကို သံလွင်အိပ်မက် မဂ္ဂဇင်း အတွဲ (၃) ၊ အမှတ် (၃) အထူးထုတ်မှာ ဒလက်တောပုံပြင် ဝတ္ထုတိုနဲ့အတူ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရက်ပိုင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က သူတို့လုပ်ထားတဲ့ forum မှာ ဝင်ပြောပေးပါဆိုလို့ သူတို့ Web Portal ကို ရောက်သွားခဲ့တာမှာ အခုစာလေး ရေးဖြစ်တာပါ။ Forward Email တွေမှာလည်း ဖတ်ပြီးကောင်း ဖတ်ပြီးမှာပါ။ တချို့ကလည်း အကောင်းမြင်သလို တချို့ကလည်း ပြည်တွင်းက လူတွေရဲ့ risk ကို မသိလို့ လျှောက်ရေးနေတာလို့ ပြောကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လိပ်ပြာသန့်သန့်နဲ့ ရေးခဲ့တာပါ။ မင်းလောင်းမျှော်နေမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်နိုင်တာလေးတွေ တနိုင်တပိုင်ဆိုသလို လုပ်ထားစေချင်တာပါဗျာ။
ဗဆွေ (သို့) လှို့ဝှက်သောအပြုံး
http://kotoegyi.multiply.com/journal/item/26 မှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
Oct 10, '08 1:50 PM
တလောက ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ကိုဗဆွေနှင့်ကုန်သည်လမ်းရှိ ပြည်သူ့စာပေ စာအုပ်ဆိုင်တွင် မတော်တဆ သွား၍တွေ့လေသည်။
ကွဲကွာနေသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်သဖြင့် ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် ထွေရာလေးပါး လျှောက်၍ ပြောကြရင်းက တာရာတွင်ပါသော လူကိုလေ့လာခြင်း ဆောင်းပါးများအကြောင်းရောက်သွားရာ ကိုဗဆွေက `ကိုယ့် အကြောင်းရေးရင်တော့ ဗဆွေ သို့မဟုတ် ဂျပိုး လို့ ရေးပေါ့ ကွာ၊ မဟုတ်ဘူးလား။ ကိုယ်က စင်စစ် ဂျပိုး ပဲကွ …´ဟု ပြောကာ သူ့ဘာသာသူ သဘောကျပြီး ရယ်မောလျက် ရှိလေသည်။
ပညာတတ်တိုင်း ပညာတတ် အသိရှိသူ မဟုတ်ကြပါ။
ပညာတတ် တိုင်း ပညာတတ် အသိ ရှိသူ မဟုတ်ကြပါ။ ကျနော်တို့ဗမာတွေရောထွေးနားလည်မှားနေသည့် အဓိပ္ပါယ် ဖေါ်ဆောင်ချက် တခုမှာ (ပညာတတ်) ဟူသော ဝေါဟာရဟုထင်မိသည်။ ကျနော်တို့အများက (ဘွဲ့) ကလေးတခု ရပြီဆို လျှင် (ပညာတတ်) ဟုလွယ်လွယ် သတ်မှတ် လိုက် ကြသည်။ အမှန်က (ဘွဲ့) ဆိုသည်က အခြေခံ ကိုသာသင်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် တချို့ ဘာသာရပ်များတွင် အလုပ်သင် Internship ဆင်းရသည်။ ဆရာဝန်ပညာရပ်ကို ၇ နှစ်သင်ကြားအပြီး အလုပ်သင် တနှစ်ထပ်ဆင်းပြီးမှ ဗမာနိုင်ငံတွင် ဆေးကုခွင့် လိုင်စင် (ဆမ) လျှောက်ခွင့်ရှိသည်။
ဒီမိုကရေစီ တတိယလှိုင်း ပါရာဒိုင်း
Author: lubo601 | 3:38 AM | No မှတ်ချက် |
by cherrymyodaw on Friday, June 24, 2011 at 3:07am
(၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ (၃) ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာပို့စ် ဂလိုဘယ် သတင်းဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာ့ အဆိုအရဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ ကတော့ အာဏာရှင် အဆင့်ကနေ Hybrid regimes ဒီမိုကရေစီ ကပြားအဆင့် ကို ကူးပြောင်းနေဆဲပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ဆိုရမယ် ထင်ပါတယ်။)
ကမ္ဘာ့အလှဆုံး ပန်းခင်းများရဲ့ ဥယျာဉ်
Author: lubo601 | 3:28 AM | No မှတ်ချက် |
သိပ်ကိုလှပ ခမ်းနားတဲ့ ပန်းခြံကြီးတစ်ခုထဲ အလည်သွားကြည့်ကြပါစို့လားရှင်။ အဲဒီ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးကတော့ ကန္တာရထဲက အိုအေစစ်လို့ ပြောလို့ရလောက်အောင်ဘဲ ပူပြင်းခြောက်သွေ့လှတဲ့ UAE နိုင်ငံရဲ့ ရာသီဥတုကို အံတုပြီး ပန်းမျိုးစုံလင်စွာ လန်းဆန်းပွင့်ဝေနေအောင် အထူးပြင်ဆင်ထားတဲ့ Al Ain Paradise အမည်ရ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးပါ။ Akar မြေယာရှုခင်း ပြုပြင်အလှဆင်ရေးလုပ်ငန်းက တာဝန်ယူကာ အလှဆင်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခင်ကတော့ စတုရန်းပေ ၇၀၀၀ခန့်သာ ကျယ်ဝန်းသော်လည်း ခုချိန်မှာတော့ စတုရန်းမီတာ ၂၁၀၀၀ အထိ ကျယ်ဝန်း လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ လျှောက်လမ်းများ၊ ကော်ရစ်ဒါများဟာ အရှည် စုစုပေါင်း ၂၄၀၀ မီတာခန့် လှပခမ်းနားစွာ ရှိနေပါတယ်။
by Han Thit Nyeim on Friday, June 24, 2011 at 12:24pm
ရာသီဥတုက စိမ့်နေအောင်အေးသည်။ အပြင်မှာ မိုးလေတွေ သည်းနေသည်။ လှမ်းကြည့်လျှင် ဘယ်ကိုမှ မမြင်ရ။ အရိုးကွဲမတတ် တိုက်နေသည့် လေနှင့် လျှပ်နွယ်တဝင်းဝင်း မိုးထစ်ချုန်းသံတို့က ကမ္ဘာပျက်နေသလား မှတ်ထင်ရသည်။
Author: lubo601 | 3:15 AM | No မှတ်ချက် |
by Thet Wai on Friday, June 24, 2011 at 2:41pm
သျှင်နေမင်း: ထို့ ကြောင့် ယောက်ျားဟုခေါ်သည်...: "ဒီမတော်တဆဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါပေါ်မှာကျွန်တော်တရက်မှစိတ်ဓာတ်မကျပါဘူး..ဒီအဟန့် အတားတွေကိုလက်တွေ့ မပါ မပါပဲစိတ်ကူးယဉ်လို့ မရပါဘူး ..ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ေ..."
သျှင်နေမင်း: ကွပ်လပ်: "မတော်တဆမှုနဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး ကျွန်တော့်အပါးက ထာဝရထွက်ခွါသွားတာ အခုဆိုရင် (၄)နှစ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ အိမ်မှုကိစ္စဘာမှ မလုပ်တတ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့ လူမမယ..."
"ဟိုးအရင်အတိတ်က တက္ကသိုလ်ဆိုတာ ဒီလိုပါ"
Author: lubo601 | 7:07 AM | No မှတ်ချက် |
by Myo Chit Myanmar on Thursday, June 23, 2011 at 9:10am
ပညာတတ်တိုင်း ပညာတတ်အသိရှိသူ မဟုတ်ကြပါ။
Author: lubo601 | 5:41 AM | No မှတ်ချက် |
by Bo K Nyein on Thursday, June 23, 2011 at 6:43am
အသိ မရှိကြတဲ့အပြင် ပိုဆိုးတာက (မနာလိုစိတ်)
တပ်ဦး ကျောင်းသားဟောင်း ဒေါက်တာညီညီနဲ့ စစ်တပ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ဖျက်စီးခဲ့ကြတာကြာင့် ဗမာနိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးဟာ စံမမှီဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ ဒေါ်စုနေရာကကြည့်ရင် အင်အာလ်ဒီ လူငယ်တွေကိုမျက်စိ ဖွင့်ပေးရမယ်။ capacity အသိစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးရမယ်။ လူမရှိတော့ ရှိတဲ့သူကို ပဲအားကိုးရတော့မှာပေါ့။ ပြည်ပရောက် အတိုက်ခံအချို့ဟာ ဒေါ်စု ရွေးချယ်သူကို မကြေနပ်တာနဲ့ ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံလာကြပါတော့တယ်။ (လူ) ကို မုန်းတာအပြင် မနာလိုစိတ်တွေလည်း အများကြီးပါပါတယ်။ ဒါက ကျနော်တို့ ဗမာတွေရဲ့ အကျင့်ပဲလေ။ ကိုယ်ကတော့ မကြိုးစားချင်ကြဖူး။ ဝေဖန်ဖို့ ကဲ့ရဲ့ဖို့ ဆိုရင် ရှေ့တန်းက …
"Facebook ၏ တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁၀၀ဘီလျံထိ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိ "
Author: lubo601 | 4:58 AM | No မှတ်ချက် |
ကမ္ဘာကျော် Social Networking ၀က်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်သော Facebook၏ တန်ဖိုးသည် လာမည့်နွေဦးပေါက်တွင် ဒေါ်လာ (၁၀၀)ဘီလျံကျော်ထိ မြင့်တက်လာဖွယ်ရှိကြောင်း ဈေးကွက်လေ့လာရေး ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ဟောကိန်းထုတ်လိုက်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ထူထောင်လိုက်သော Facebookသည် (၂၀၁၁)ခုနှစ်တွင် ဒေါ်လာ(၂)ဘီလျံမျှ ဝင်ငွေရရှိမည်ဟု ယမန်နှစ်က ခန့်မှန်းဖော်ပြထားသည်။ အချက် အလက် မှတ်တမ်းများစွာကို အခြေခံပြီးနောက် ကယ်လီဖိုးနီးယား အခြေစိုက်ကုမ္ပဏီ Facebook လာမည့်နှစ် အတွင်း ဒေါ်လာ (၁၀၀)ဘီလျံထိ တန်ဖိုးရှိလာမည်ဟု Wall Streetဂျာနယ် က ဖော်ပြလိုက်သည်။
"ဘဝဇတ်ခုံပေါ်မှ ဆေးစက်ကျရာ ကပြ အသုံးတော်ခံ အရုပ်ကလေးများ"
နတ်သမီးတလောက ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်စရာရှိလို့ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးဘက်ခဏရောက်ဖြစ်ပါတယ်..ဈေးရောက်ရောက်ချင်းပဲ
"ဗိုက်နာခြင်း ပါမောက္ခနေဝင်း (ဆေးပညာ)"
Author: lubo601 | 4:20 AM | No မှတ်ချက် |
[By Ko Ko Htay]
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း သည် လူနာများ အဖြစ် အများဆုံးနှင့် ဆရာဝန်ထံ လာရောက် ပြသသည့် အများဆုံး ရောဂါ လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ပုံစံစုံ၊ ဝမ်းဗိုက်နေရာအနှံ့ နာလေ့ရှိ သည်။ မျှဉ်းမျှဉ်း နာသကဲ့သို့ ပြင်း ပြင်းလည်း နာတတ်သည်...။ အများစု မှာ သာမန်နာ၊ ခဏနာလေ့ရှိသော် လည်း တစ်ခါတစ်ရံ ဆိုးဆိုးရွားရွား၊ အချိန်ကြာကြာ နာတတ်သည်။ ထို အခါ လူနာများက စိုးရိမ်ပူပန်လာကြ သည်။ ဘာကြောင့် နာသနည်းဟု သိလိုကြသည်။
အမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့ SEAL(Sea,Air,Land ) 6
Author: lubo601 | 10:43 AM | No မှတ်ချက် |
by Bo K Nyein on Tuesday, May 17, 2011 at 8:31am
ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း | သောကြာနေ့၊ မေလ ၁၃ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၂ မိနစ်
လောကကြီးမှာအဟောင်းကြွေပြီး အသစ်ပေါက်လာတာတွေ ရှိသလို၊ အရှုံးကနေ အမြတ်ထွက် ဘ၀သစ်ပေါက်ဖွားလာတာတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကရတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ စစ်ဒဏ်မခံရတဲ့ နိုင်ငံတွေက ပိုရ
Author: lubo601 | 9:06 AM | No မှတ်ချက် |
ယနေ့ ကမ္ဘာမှာ မဖွံ့ဖြိုး မတိုးတက်သေးတဲ့ နိုင်ငံများ အနေနဲ့ လက်ဝဲ- လက်ယာ အုပ်စုများရဲ့ အကူအညီ ယူကြပုံမှာ အမြင် အသီးသီး ဝေဖန်နည်း အဖုံဖုံ ရှိကြ ပေလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်က ဘာ အကူအညီတွေ အစစ်အမှန် ရကြပြီး ဘယ်နိုင်ငံတွေက ဘယ်လောက် ဖြည့်တင်းခဲ့တယ် ဆိုတာ အတိအကျ ဂဏန်းဇယားတွေ ရှိရပါလိမ့်မယ်။ လက်ယာအုပ်စုက အကူအညီတွေ ဟာ အမြတ်အစွန်း ပဓာနထား၍ လက်ဝဲအုပ်စုရဲ့ အကူအညီကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်တွေ ဘယ်အထိ မှန်ကန်တယ်ဆိုတာလဲ ဆန်းစစ်လေ့လာ နိုင်ကြဖို့ပါပဲ။
နိုင်ငံရေးတွင် ပါတီနှင့် ပြည်သူများ အခန်းကဏ္ဍ
Author: lubo601 | 9:03 AM | No မှတ်ချက် |
နိုင်ငံရေးစနစ် တစ်ခုကို တည်ဆောက်ရာတွင် အထင်ရှားဆုံးနှင့် အပေါ်လွင်ဆုံးမှာ နိုင်ငံရေး ပါတီများဖြစ်သည်။ စနစ်အတွက် ပါတီသည် အသက်ဟူ၍ပင် ဆိုနိုင်သည်။ ပြည်သူတိုင်း ပါတီကို စိတ်ဝင်စားသည် ဟူ၍တော့ မပြောနိုင်ပေ။ တစ်ခုခု မကျေနပ်ချက်များ ပေါ်လာလျှင်၊ အခြေအနေကို အခွင့်ကောင်း ယူပြီး ဟိုအော် သည်အော် ပါတီတွေက၀င်လုပ် ပေးလာလျှင်၊ မျှော်လင့်ချက်များပေးနိုင် လျှင်၊ ပေးနိုင်ကြောင်း အပြောကောင်းလျှင်၊ ပါတီအပေါ် စိတ်ဝင်စားချင်ချင် ဖြစ်လာကြလိမ့်မည်။ မဲပေးပြီး လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြတာပဲ၊ ခုတော့ နားငြီး သက်သာအောင် မဲပေးလိုက်ကြ ဆိုသည့် လူတန်းစားက အများစု ဖြစ်နေတတ်သည်ကိုလည်း သတိပြုကြရမည်။
Author: lubo601 | 8:55 AM | No မှတ်ချက် |
'ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ'၊ 'နိုင်ငံရေး လုပ်တယ်ဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေ ဖြစ်အောင် လုပ်တာ' ဤစကား များကို ကဗျာဆရာ၊ စာရေးဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောနေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။
[ By De Nay ]
“ ဘယ်သူလဲ ”
“ ငါပါကွ ဇရာပါ ”
“ ဘာကိစ္စလဲ ”
“ မင်း အသက်ငါးဆယ်ပြည့်တဲ့ အကြောင်း လာပြောတာ ”
“ သိပါတယ် ”
“ သိပါတယ် လုပ်မနေနဲ့ ။ တံခါးဖွင့်ပါဦး ”
တံခါးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ဇရာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး ။ သူ့နောက်မှာ ပြုံးစိစိနဲ့ လှမ်းကြည့်နေသူနှစ်ယောက် ။ ဗျာဓိနဲ့ မရဏ ။
ဇရာက နောက်ကိုတစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ပြောနေပြန်တယ် ။
ကျွန်မ၊ သမိုင်းနဲ့ ထော်လော်ကန့်လန့်ပညာရေး
Author: lubo601 | 2:24 AM | No မှတ်ချက် |
သမိုင်းကိုသင်တာ မအ အောင်လို့လို့ သမိုင်းပါရဂူ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ကျွန်မတို့ တွေ သမိုင်း ဆိုတာကို တတိယတန်း ကျောင်းသူ ဘ၀ကစပြီး သင်ကြားခဲ့ကြရပါတယ်။ ကျွန်မတို့တွေ သမိုင်းကို မှန်မှန်ကန်ကန် သင်ကြားခံခဲ့ကြရရဲ့လား။ ကျောင်းများမှာ သမိုင်းကိုဖတ်ပြီး ကျောင်းသားများ ကိုယ့်အမြင်ကို ဆွေးနွေးတင်ပြ အတွေးဖလှယ်ခဲ့ကြရရဲ့လား။ စတုတ္တတန်း ဆရာမကလွဲလို့ တခြားဆရာများထံက တခါမှမရခဲ့ ဖူးပါဘူး။ ဆရာမ ကျောက်သင်ပုန်းမှာ ရေးပေးတဲ့ မေး၊ ဖြေ သင်ခန်းစာများကိုလိုက်ကူးပြီး သမိုင်းကို သမိုင်းကြောင်းလို မလေ့လာခဲ့ရဘဲ ကြောက်စရာ ကျက်စာတစ်ရပ်အနေနဲ့ အလွတ်ကျက်ပြီး ဖြေခဲ့ကြရတဲ့ ကျောင်းသားတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ။
Objective Burma: ဂျပန်ခေတ် ရှားပါး မြန်မာပြည် စစ်တွင်း ရောင်စုံ မှ...
Author: lubo601 | 2:06 AM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 2:02 AM | No မှတ်ချက် |
အိမ်ထောင်ကျပြီးသူရော၊ မကျသေးသူတွေအတွက် ငွေစုစာအုပ်လေးတစ်အုပ် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်က ငွေကြေးစုဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကြည်နူးခြင်း၊ အမှတ်တရတွေ စုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်မိတဲ့ စာလေးတစ်ပုဒ်က ဒီလိုဆိုပါတယ်။ ကျွန်မ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ေ...န့က မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့အဖြင့် ငွေစုစာအုပ်တစ်အုပ်ကို အမေက လက်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မအတွက် အမွေများလားပေါ့။ စာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်တော့ စုထားတဲ့ငွေက ကျပ် ၁ဝဝဝ ပဲရှိတယ်။
Author: lubo601 | 1:53 AM | No မှတ်ချက် |
Aung San Oo 12:04pm Jun 22
တစ်ခါတုန်းက အိမ်တစ်အိမ်မှာ အပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ခြံထဲမှာ
ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးရှိတယ် အကျယ်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ ၄၀ လက်မ
အမြင့်ကတော့ ၁၀ လက်မပေါ့။ ခြံကိုလာတဲ့သူအားလုံး
သားက “ဖေဖေ အဲဒီ ကျောက်တုံးကြီးကို ဖယ်လိုက်ရအောင်လား”
ဖေဖေက “ကျောက်တုံးကြီးကိုလား အဖိုးခေတ်ကတည်းက ဒီမှာထားထားတာ
အဲလောက်ကြီးတာ ဘယ်အချိန်ထိတူးနေရအုန်းမလဲ လမ်းလျှောက်တာ
ဂရုစိုက်လိုက်ရင်ပြီးရော မလား” ဒီလိုနဲ့ သားက အဖေဖြစ်ချိန်ရောက်သွားတယ်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် တာဝန်သိတတ်မှု ဆိုတာဘာလဲ (Corporate Social Responsibility)
By HR Journal
စီးပွားရေး (Business) လုပ်ငန်းများရဲ့ မူလ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အမြတ် ရရှိရေး (Profit) နှင့် လုပ်ငန်းကျယ်ပြန့် ကြီးထွားမှု (Growth) ဖြစ်သော်လည်း ယနေ့ခေတ်တွင် Customer များနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ ဖိအားပေး တောင်းဆိုမှုများကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုးဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက် လာကြရသည်။ ယခင်က Customer များ အနေဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူ သုံးစွဲကြရာ၌ အရည်အသွေး (Quality) နှင့် ဈေးနှုန်း (Price) တို့ အပေါ်၌သာ မူတည်စဉ်းစား ခဲ့ကြရာမှ ယနေ့ခေတ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ Environmental Issue ကဲ့သို့သော Social Responsibility အချက်အလက် များကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစား လာကြသည်။
Author: lubo601 | 1:13 AM | No မှတ်ချက် |
အချိန်တို့သည် တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးနေကြသကဲ့သို့ အတိတ်၏ အရိပ်တို့သည်လည်း တရွေ့ရွေ့ မှုန်ဝါးခဲ့ကြပါသည် ။ အိပ်မက် မက်သောအခါ ပြန်လည်တွေးဆကြည့်လျှင် မှုန်ဝါးဝါးသာ ပြန်လည်သတိရနိုင်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပါသည် ။ သို့သော် ထို အတိတ်များ ၊
အိပ်မက်များတွင် ပြုံးပျော် ကြည်နူးစရာ ၊ လွမ်းမော တမ်းတစရာ ၊ ကြေကွဲ ရင်နင့်စရာ ၊ မျှော်လင့်မှန်းဆစရာ ၊ ပေါ့ပါး ရယ်ရွှင်စရာ စသည်တို့က အဖုံဖုံအလီလီ ရှိနေမည်မှာ သေချာပါသည် ။ဤသည်တို့ကို မှတ်မိနိုင်သမျှ ပြန်လည် စုစည်းကြည့်သောအခါမိမိတို့၏ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအဖေါ်များကို မျှဝေခံစားကြည့်စေလိုသော ဆန္ဒကလည်း ဖြစ်လာရပြန်ပါသည် ။ ဤမှ တစ်ဆင့်အိပ်မက်ပုံဆောင် အတိတ်တို့က စီးဆင်းလာရပါတော့သည် ။
Author: lubo601 | 1:08 AM | No မှတ်ချက် |
[By Shwe Yee]
ပိုက်ဆံ နဲ့ ဘာသာ
Author: lubo601 | 1:03 AM | No မှတ်ချက် |
[By Kyaw Swa Hein]
ငွေဟာ လူတွေရဲ့ သည်းခြေကြိုက် တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေရဲ့ သည်းခြေကြိုက်ဖြစ်သည့်အတွက် လူတိုင်းဟာ ငွေကို မက်မောကြပါတယ်။
ငွေကြောင့်လည်း သောကပင်လည်ဝေနေကြရတဲ့ လူတွေလဲ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ငွေကို လူတွေ ဘာကြောက်မက်နေကြတာလဲလို့ဆိုရင်
အချိန်ကား- ၂၀၁၁ ခုနှစ် နေရာကား- မန္တလေးတိုင်း "ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ ငါတို့ ဒီအတိုင်း ငြိမ်ခံနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ တခုခုတော့ လုပ်ရမယ်" "ငါလဲ မင်းလိုပဲ စဉ်းစားမိတယ်။ ဘယ်နဲ့ကွာ။ စစ်မတိုက်ချင်လို့ စစ်တက္ကသိုလ်မတက်ပဲ ရိုးရိုးတက္ကသိုလ်တက်တာပေါ့။ ဘွဲ့ရပြီးကာမှ ငါတို့က စစ်သားဝင်လုပ်ရမှာလား" "အေးကွာ။ တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေတာလဲ မဟုတ်ဘူး" "တတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူးဟေ့။ လူသတ်ပွဲဖြစ်နေတာ။ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတုန်းက ဘုန်းကြီးတွေ၊သီလရှင်တွေကို ပစ်သတ်တာ၊ ရိုက်သတ်တာ မတွေ့ဘူးလား။ ငါတို့ကို စစ်မိန့်နဲ့ အဲလို သတ်ခိုင်းဖို့ ကြံစည်နေတာ" "မိုက်ရိုင်းတယ်ကွာ။
ပါရမီအချစ် ဆိုတာကတော့ သူတစ်ပါး အကျိုးကိုပဲ ငဲ့ပါတယ်။ မိမိအကျိုးကို မငဲ့ပါဘူး။ သူ့ဆီကတော့ ဘာတုန့်ပြန်မှုမှ မမျှော်လင့်ပါဘူး
by Kyaw Win Khine on Wednesday, June 15, 2011 at 12:58pm
From this link : http://www.myanmarfamily.org/
လူတိုင်းလူတိုင်း အချစ်နဲ့ကင်းသူရယ်လို့ သိပ်မရှိနိုင်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ရှိခဲ့ရင်လည်း အနည်းအကျဉ်းပေါ့..။ လူတစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး ချစ်ကြတယ်.. ကြိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာ သိပ်တော့ မထူးဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ချစ်နေကြတဲ့ အထဲမှာ ချစ်တတ်ဖို့တော့ လိုတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်တာတော့ အမျိုးမျိုး ရှိတာပေါ့။ တချို့ ကျလည်း ချစ်ချင်လို့ကို ချစ်တယ်၊ တစ်ချို့ကျလည်း မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်၊ တစ်ချို့ ကျလည်း တဏှာကို အရင်းခံ ပြီးတော့ ချစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ချစ်ချစ်ပေါ့.. ချစ်တတ်ဖို့ အဓိက ကျပါတယ်..။ အချစ် သုံးမျိုး ရှိပါတယ်။ (၁) ချစ်သူအချစ် (၂) မိသားစုအချစ် (၃) ပါရမီအချစ်ပါ။
by Nine Nine Sanay @ နိုင်းနိုင်းစနေ on Tuesday, June 21, 2011 at 3:57am
"ဘာဖြစ်လို့လဲ?" ကောင်လေးက နားမလည်စွာနဲ့မေးတယ်။
ကောင်မလေးစကားကို ကောင်လေးက ဘာမှပြန်မပြောဘဲ ဆေးလိပ်ကို တဖွာပြီးတဖွာ ဖွာနေတယ်။
Author: lubo601 | 6:45 AM | No မှတ်ချက် |
by Moe Tar on Sunday, January 16, 2011 at 7:15pm
လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်ခန့်က သတ္တဗေဒပါမောက္ခ ဆရာမကြီးက တက္ကသိုလ်မော်ကွန်းထိမ်းနှင့်အတူ သြ၀ါဒ စကားမွတ်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုစကား ထိုသြ၀ါဒတို့သည်မိမိဘ၀ တခုလုံးအတွက် လိုက်နာကျင့်သုံး ဆောက်တည်ရမည့် တန်ဘိုးကြိး ဆုံးမစကားများ ဖြစ်သည်ဟု ခံယူမိပါသည်။
Author: lubo601 | 6:33 AM | No မှတ်ချက် |
by cherrymyodaw on Tuesday, June 21, 2011 at 6:59am
(၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် ဝေဖန်ရေးဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ပါ။ အရင်တုန်းက ဖော်ပြခွင့်မရတဲ့ ဆောင်းပါးမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။)
အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များသည် ယခင် တပ်မတော် အစိုးရ လက်ထက် ၂၀၁၁ မတ်လက သတင်းထောက် ပိုင်စိုးဦး ကြုံခဲ့ရတဲ့ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု အစိုးရ အဖွဲ့သစ် လက်ထက်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကိုယ်တိုင် သန့်ရှင်းသော အစိုးရဖြစ်ရေး ဆော်သြနေချိန် ဖြစ်တာနဲ့အညီ ယခင် အဖြစ်အပျက်များမှ ပြုပြင်စရာများ ပြုပြင်နိုင်စေရန် တင်ပြလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
by cherrymyodaw on Tuesday, June 21, 2011 at 6:59pm
by Lu Maw on Tuesday, June 21, 2011 at 3:29pm
Author: lubo601 | 5:19 AM | No မှတ်ချက် |
Aung San Oo 12:10pm Jun 21
ဒေါင်းလုပ် = http://www.facebook.com/l/33feceR46FnI6gUfoS_CVnksTsQ/www.mediafire.com/?n9mg0mszkev
ဒေါင်းလုပ် = http://www.facebook.com/l/33fec4wSHt8eDwZC30EM3JukScw/www.mediafire.com/?31mmlsz293m
ကုလားထိုင်တစ်လုံးသာရွေးထိုင်ပါ (Choose One Chair)
Author: lubo601 | 5:17 AM | No မှတ်ချက် |
အီတာလျံလူမျိုး နာမည်ကြီး အဆိုကျော် လူစီယာနို ပါဗရော့တီ (Luciano Pavarotti) ၏ ဖခင်သည် မုန့်ဖုတ်မား တစ်ယောက် ဖြစ်သည်. . .သို့သော် ဂီတဘက်တွင် အလွန်ထက်သန်သည်. . . သူ့သားကို အောင်မြင်သော ဂီတပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်စေလိုသော ဆန္ဒရှိသည်. . .
ထို့ကြောင့်ငယ်ရွယ်စဉ်မှာပင် တေးဂီတာ အနုရသများနှင့် ကျွမ်းဝင်အောင် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင် ပေးခဲ့သည်. . . ဖခင်၏ ပဲ့ကိုင်လမ်းညွှန်မှု၊ မိမိကိုယ်တိုင် ထက်သန်တက်ကြွစွာ အားထုတ်မှုတို့ ကြောင့် ပါဗရော့တီသည် ကမ္ဘာသိ အဆိုတော် တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်. . . .
ဦးဦးမှော်ဆရာ ဂရုမေးမှ ကူးယူဖေါ်ပြပါသည်။
ကင်းဝန်မင်းကြီး _ ပြင်သစ်နိုင်ငံသွား နေ့စဉ်မှတ်တမ်းကျီးသဲလေးထပ်ဆရာတော် _ စွယ်စုံကျော်ထင်ကျမ်း
Author: lubo601 | 10:02 AM | No မှတ်ချက် |
by Khin Hnin Kyi Thar on Monday, June 20, 2011 at 11:06pm
အဲ့ဒီနေ့က မိုးတွေ သည်းသည်းမဲမဲ ရွာနေခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ပါ။ အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့အပြင်ကပြန်ရောက်ခဲ့တဲ့ကျွန်မ အံ့သြတကြီး တွေ့လိုက်ရတာကတော့ စာအုပ်ကို ခေါင်းခုပြီး အိပ်ပျော်နေသူတစ်ယောက်(ကျွန်မနဲ့ ရွယ်တူလောက်ဖြစ်မယ့်လူငယ်တစ်ယောက်ဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်)။ အော်…စာပေရဲ့ တန်ဖိုး ကြီးမားပေစွ။
အိပ်ပျော်နေတဲ့ထိုသူကို ကျွန်မစိတ်မဆိုးမိပါဘူး။ ထမင်းစားပြီးချိန်ကြီးလည်းဖြစ် မိုးကလည်း အေးဆိုတော့ စာဖတ်ရင်းအိပ်ချင်မှာပဲလေ။ တစ်ဖက်မှာကလည်းစာကြည့်တိုက်ရဲ့ စည်းကမ်း၊ ပြီးတော့ သူအိပ်ပျော်နေတာက ကြွေပြား အေးအေးကြီးပေါ်မှာ။ မနိူးပဲနေလိုက်လို့ကတော့ လေဖြတ်မှာ အသေချာပဲ။
Author: lubo601 | 9:51 AM | No မှတ်ချက် |
by Ainn Chann Myay on Thursday, May 12, 2011 at 4:03am
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်တုန်းက Sony PlayStation Network ကို hackers တွေက hack လုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူသန်းပေါင်းများစွာရဲ့ ပါစင်နယ်ဒေတာတွေ ပါသွားပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ် အင်ဖိုတွေပါ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းလေးကို ဖတ်မိလို့ ဖဘပေါ်က လူငယ်တွေကို ၂၀၀၉ တုန်းက ကျမရေးသော စာတစ်ပုဒ်ကို ဒီမှာပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အချက်အလက်တွေကတော့ ၂၀၀၉ တုန်းက အချက်အလက်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ အချို့ဝါကျတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲ edit လုပ်လိုက်ပါတယ်...
by Ainn Chann Myay on Monday, June 20, 2011 at 11:20pm
ပျားတွေ၊ ပန်းတွေ၊ ပင့်ကူတွေ အကြောင်းရေးနေရင်း တန်းလန်းနဲ့ လူတွေအကြောင်း ခဏလေး ရေးခွင့်ပြုပါ။
ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့က ကနေဒါနိုင်ငံ၊ ဗင်ကူးဗားမြို့မှာ ရုန်းရင်ဆန်ခတ်ပြုမှုတစ်ခု ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကတော့ ရေခဲပြင်ဟော့ကီ ဗိုလ်လုပွဲမှာ ယူအက်စ်က ဘော့စတွန်အသင်းကို ရှုံးသွားလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော့ကီက ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအားကစားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားအားကစားက Lacrosse ပါ။ ဒါပေမယ့် ဟော့ကီက ပိုနာမယ်ကြီးပါတယ်၊ ပိုလည်း ကြမ်းတမ်းတယ်။ ဟော့ကီ ကစားသမားတွေဟာ ပိုက်ဆံတွေ ဒေါ်လာသန်းချီရသလို ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်များလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် အမှတ်တယ ကျောက်တိုင်တွေဘာတွေစိုက်လို့ အချို့တွေက မကြိုက်ကြပါဘူး။ အာဖဂန်တို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာ ဒုက္ခခံအသက်သွားပေးတဲ့ ကနေဒီယန်စစ်သားလေးတွေကို ဂုဏ်ပြုရမယ့်အစား ငွေကြေးနဲ့ကစားတဲ့ ရေပေါ်ဆီ ကနေဒီယန်အားကစားသမားတွေကို ဂုဏ်ပြုတာဟာ မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီး ခဏခဏ အသံတွေထွက်ပါတယ်။
မျက်စိ(သို့ )သိသင့်မည်ထင်သော မျက်လုံးအကြောင်းသိကော...
ရယ်စရာ နောက်ကွယ်မှာ မျက်ရည်တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာချစ်...
“လူထုအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခြေခ...
ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ အဓိပါယ်များစွာဖြင့် ပြောင်မြောက်လ...
ကျွန်တော့် ရောဂါ (ကျနော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ရော ဂါနဲ့ တူ...
"တစ်ခါတုန်းက မိသားစုတစ်စုနေတဲ့ တိုက်ခန်းတစ်ခန်းတံခ...
ရောမလိုကျင့်ခြင်းနှင့် ၄င်း၏အစာမကြေမှုများ (locali...
အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူြးေ...
အင်္ဂလိပ် ဥပဒေပြုစနစ် အခြေခံမိတ်ဆက်၊ Common Law Syst...
"Facebook ၏ တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁၀၀ဘီလျံထိ မြင့်တက်လာဖွယ...
"ဘဝဇတ်ခုံပေါ်မှ ဆေးစက်ကျရာ ကပြ အသုံးတော်ခံ အရုပ်ကလေ...
မြန်မာနိုင်ငံကရတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံခြားအကူအညီ စစ်ဒဏ်...
Objective Burma: ဂျပန်ခေတ် ရှားပါး မြန်မာပြည် စစ်...
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေရဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် တာဝန်သ...
ပါရမီအချစ် ဆိုတာကတော့ သူတစ်ပါး အကျိုးကိုပဲ ငဲ့ပါတယ...